4.4/5 Iireyithingi ezili-10 kunye noHlolo olu-10 100% Ivunywe ngabasebenzisi abali-10.
Iinkwenkwezi ezi-5 I-5% igqityiwe 5 4 Iinkwenkwezi I-5% igqityiwe 5 Iinkwenkwezi ezi-3 0% Gqibezela 0 Iinkwenkwezi ezi-2 0% Gqibezela 0 Iinkwenkwezi ezi-1 0% Gqibezela 0
intombi yomfazi taurus indoda ebhedini
Iimpawu zebrashi yamazinyo kaGqr
100% i-silicone: Izinto ze-silicone zi-BPA zikhululekile kwaye zithambile kakhulu kwiintsini zethenda.
Amacala amabini: Ibrashi yomnwe ingasetyenziselwa kumacala omabini, ngaloo ndlela yenza kube lula ukuxubha amazinyo.
Kulula ukuyisebenzisa: Ibrashi ibhetyebhetye njengoko umnwe wakho unokuba njalo, kwaye ke kulula ukuyisebenzisa.
Indawo yokugcina: Ungavala kwaye ugcine ibrashi emva kokusetyenziswa.
UGqr. Brown's Finger Toothbrush Specifications
Ubunzima bento: 18.1g
Imilinganiselo yemveliso: 3.8 x 10.4 x 14.7cm
Ubuncinane obucetyisiweyo bobudala bomenzi: 0.0
Uyisebenzisa njani ibhrashi yamazinyo kaGqr
Susa ibhrashi yamazinyo yomnwe kwindawo yokugcina.
Coca ibhrashi yamazinyo yomnwe.
Faka umnwe wakho kwibrashi yamazinyo. Ibhrashi yamazinyo iza nezinto zokucoca ezimacala mabini.
Ngoku, phulula umntwana wakho ngeentsini ngobunono emlonyeni wonke.
Uphononongo lwebrashi yamazinyo kaGqr
Ukuthelekelela (Phantsi ukuya Phezulu)Ukalisho (Phezulu ukuya Phantsi)MvanjeOmdala
Nasima Khatun |kwiinyanga ezi-5 ezidlulileyo
4.6 / 5 I-Nasima Khatun iyayivuma le mveliso
Ithetha ntoni imartini emdaka
Fantastic brush ..dr brown is too good...le nto intle kakhulu...sebenzisa ilula kakhulu...ndiphathele unyana wam le brashi yamazinyo intle xa izinyo lihluma. Wathenga ngebrush eziy2 enye yakhe neyobhuti wakhe. Ngoku uyakonwabela ukuxukuxa izinyo.Ndiphathele unyana wam le brashi yamazinyo intle xa izinyo lihluma. Nguye ongakuthandiyo ukubrasha izinyo kwaye xa sibona le cute dr browns infant toddler tooth brush.
Iluncedo ? 0 0 Phendula (0) ···
Sunidhi Bansal |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
4.5 / 5 I-Sunidhi Bansal ivuma le mveliso
Ibrashi yamazinyo yomntwana omncinci kaGqr Brown Finger Toothbrush
Ndiye ndawuthenga xa umntanam eqala amazinyo. Ibrashi yamazinyo kaGqr Brown iluncedo kakhulu kumntu omncinci. Kulula ukuhlamba. Yibrashi eyenzelwe ngokukodwa ukucoca amazinyo okanye umyalezo weentsini. bcoz Yenziwe ngezinto ezibonakalayo ukuze ndifumane iziphumo ezigqibeleleyo. Yibhrashi yomnwe yasimahla ye-BPA enokuthi isetyenziswe ukucoca amazinyo osana lwam emva kokutya / ukutya. Ngaphandle kokucoca iintsini kwintlungu ngexesha lesigaba sokuphuma kwamazinyo. Ine-bristles ethambileyo kwaye i-soo flexible ... iyayithanda
Shilpa Kohli |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
4.7 / 5 U-Shilpa Kohli uyayivuma le mveliso
Oku kufuneka .. umgangatho emangalisayo
Ndiyamthanda umyeni wam kakhulu
Le mveliso iluncedo kakhulu kwi-munchkins encinci incinci yam ineenyanga ezili-10 ubudala kwaye iNcinane idinga njengesicoci solwimi esibaluleke kakhulu ukucoca Ubungcali: 1. I-bristles ethambileyo kakhulu 2. ayinzima kakhulu 3.ukubamba okulula .4.ittractive uyilo lwe-5.bpa yasimahla 6.yenziwe ngeSilicon 6.icetyiswa kakhulu Le ikumgangatho ophezulu..
Tanvi Mohil |2 kwiminyaka eyadlulayo
4.5 / 5 I-Tanvi Mohil iyayivuma le mveliso
Sinpel ukusebenzisa ibrashi yokuqala
Umntwana wam waqala ukuba namazinyo kwiinyanga ezi-4 kwaye ndamfumana i-finger brush ukuze agcine ucoceko lomlomo. Yi-BPA simahla kwaye ayinayo ityhefu. Inamaqhakuva athambileyo angekho rhabaxa kwaphela kwiintsini zeentsana. Kulula ukufaka emnweni kunye nokuxubha amazinyo eentsana. Nabo bayayonwabela njengoko inciphisa ukucaphuka kwabo nasezintsini. Iza kwi-100% yempahla ye-silicon, eyi-sfar kwiintsana. Nditshintsha umnwe brsub phantse yonke inyanga ye-1 ngenjongo yococeko. Umntanam uyakuthanda ukuxukuxa ngale finger brush kwaye ngumsebenzi omnandi kuthi ngoku. Kulula kakhulu ukucoca ngokunjalo kwaye iza ngemibala enomtsalane kakhulu. Indawo yokugcina igcina ikhuselekile kwaye ikude kuzo naziphi na iintsholongwane.
vanaja mk |2 kwiminyaka eyadlulayo
5/5 ivanaja mk iyayivuma le mveliso
UGqr. Brown umnwe ibrashi wacetyiswa kum ngugqirha wabantwana. Uthe kungcono ukusebenzisa ibhrashi yomnwe kubantwana abanamazinyo njengoko ivuselela iintsini ukuba ziphume amazinyo ngokukhawuleza. Ikwalungile nakwimpilo yomlomo. Ugqirha wam ucebise kuphela ukuba ndiye kuGqr. Brown ibrashi yomnwe njengoko naye eyisebenzisela usana lwakhe kwaye iyasebenza kakhulu kwaye inceda ukucoca iintsini.
ipriyanka |2 kwiminyaka eyadlulayo
I-priyanka iyayivuma le mveliso
Ibrashi yamazinyo kaGqr. Brown yenziwe ngezinto ezintle kakhulu. Ndisebenzisa le brush okoko usana lwam lwaqala ukuba namazinyo. Ndimcoca amazinyo neentsini ngale brush. ithambile kakhulu kwiintsini namazinyo omntwana. Isetyenziselwa ukugcina ucoceko lweentsana ukususela kwiminyaka yobudala.
iingoma ezilungileyo kakhulu zerock ngalo lonke ixesha
Bhumika Daryani |2 kwiminyaka eyadlulayo
< p> Iluncedo ? 0 0 Phendula (0) ···
UMariam Aaquib |2 kwiminyaka eyadlulayo
3.8 / 5 UMaryum Aaquib uyayivuma le mveliso
Ibrashi yamazinyo yeminwe.
Usisi wam usebenzisa le intombi yakhe yena uneenyanga ezili-10 ubudala. Le bhrashi yomnwe nguGqr brown's yenziwe ngesilicon kwaye ine-silicon bristles. Ungasebenzisa ibrashi ngokufaka ipinger ngaphakathi kwayo kwaye uxukuxe ngayo amazinyo amancinane akho. Uyakonwabela ukuxukuxa nalo. Inezinto ezintle kwaye ayinabungozi kumntwana nangayiphi na indlela. Inokuhlanjwa lula. Kukho icala lebrashi yamazinyo kwaye ingena ngaphakathi kwaye ihlala kude ne-bust kunye nemeko engacocekanga s.
Sreenithi Sajith |2 kwiminyaka eyadlulayo
4.8 / 5 USreenithi Sajith uvuma le mveliso
Ndifumene oku njengesipho kumhlobo wam xa ndamxelela ukuba umntwana wethu uqalisile ukumazinyo. Kulula ukwazisa ucoceko lomlomo wosana lwakho kwiintsini zakuqala. Ibambe kakuhle ukuze ingaphuncuki ezandleni zomntwana. Iza netyala ukuyikhusela eluthulini.
Revathi Nagaraj |2 kwiminyaka eyadlulayo
I-Revathi Nagaraj iyayivuma le mveliso
I-silicone yomnwe womntwana isetyenziswa ngeendlela ezininzi kubantwana abasandul 'ukuzalwa.kwimeko yokusebenzisa umnwe ongenanto inokutshintsha uhlobo lomnwe we-brush.Inokucoca amazinyo obisi ngokuthambileyo ingabi yingozi kubantwana ababhetyebhetye nayo.Ibrashi igudile kwaye ihlangene kwisicoci solwimi. kwakhona ibekwe kwelinye icala ukuze isebenze ngexesha.
Imibuzo ephezulu kunye neempendulo
vishnu_ |Kwiinyanga ezili-10 ezidlulileyo
Ndingayicolisa ibrashi yamazinyo kaGqr. Brown?
UPallavi Karekar |kwiinyanga ezili-9 ezidlulileyo
Hayi, awukwazi ukuyicoca ibrashi yomnwe, endaweni yoko yihlambe ngamanzi ashushu.
Arjun Yadav |Kwiinyanga ezili-10 ezidlulileyo
Yeyiphi imathiriyeli esetyenziselwa ukwenza ibhrashi yamazinyo kaGqr. Brown?
Sindhu M |kwiinyanga ezili-9 ezidlulileyo
Ibrashi yenziwe ngezinto ze-silicone.
Ukucoca Imiboniso Yeslides Umsebenzi Ungcali Udliwanondlebe Ukukhulelwa Nokuqeshwa Utywala Ulutha Ukuthweswa Izidanga
izinto ozithumela kubahlobo bakho
injani iringi yesitya esikhulu
iindawo abaneminyaka eli-16 ubudala ukuba basebenze
yintoni imisebenzi yosapho
zeziphi iikhemikhali ezikwiinti ezivuthayo
indawo enkulu yombhoxo wegumbi lokuhlala